Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulan yeeshay – Bandhiga
Xildhibaanada Golaha Shacabka oo maanta kulan yeeshay
Kulanka 20-aad kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka oo ay goobjoog ahaayeen 141 xildhibaan ayaa waxaa shir guddoominaayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad waxaana mar kale looga dooday wax ka badalka xeer hoosaadka golaha shacabka.
141 xildhibaan ayaa maanta goobjoog ka aheyd kulanka 20-aad kalfadhiga 4-aad ee golaha shacabka, waxaana shir gudoominayay guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad.
Waxaa kulanka maanta looga hadlay wax ka badalka xeer hoosaadka golaha shacabka, waxaana kamid ahaa waxyaabaha ay ka doodeen ilaalada madaxda imaaneysa xarunta golaha shacabka iyo hubka ay wataan, sidoo kale waxaa looga dooday qodob ka hadlaayay waqtiga ay qaadaneyso saxiixa madaxweynaha ee la xiriira hindise sharciyeedyada loo gudbiyo iyo waqtiga xukuumadda ku soo gudbin karto hindise sharciyeed.
Guddoomiye ku xigeenka labaad ee Golaha Shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad ayaa sheegay in xildhibaanada loogu baahan yahay iney si taxadar leh u aqriyaan dhamaan xeer hoosaadka golaha shacabka.
“Waxaa soo jeedinayaa in qodob qodob loo soo aqriyo xeer hoosaadka maadaama uu muhiim u yahay howlaha golaha, waxa idiinka codsanaya mudanayaal inad guddiga kala shaqeysaan sidii loo soo saari lahaa xeer hoosaad muhiim noo wada ah”. ayuu yiri guddoomiye Mahad.
Ugu dambeyn Guddoomiye ku xigeenka labaad ee golaha shacabka mudane Mahad Cabdalla Cawad oo kulanka soo xeray ayaa sheegay in dooda xildhibaanada ay sii socon doonto.